1 Ihe E Mere 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 13:1-14
Ndị Izrel gara Kiriat-jierim buru Igbe Chineke (1-14)
Chineke gburu Ọza (9, 10)
13 Devid na ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha na ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha nakwa onye ọ bụla bụ́ onye ndú nwere nnọkọ.+ 2 Devid wee gwa ndị Izrel niile zukọrọnụ, sị: “Ọ bụrụ na ọ dị unu mma, dịkwa Jehova bụ́ Chineke anyị mma, ka anyị zigara ụmụnne anyị fọdụrụ n’Izrel niile ozi, ha na ndị nchụàjà na ndị Livaị nọ n’obodo ha dị iche iche+ nakwa ndị nke nọ n’ala ebe anụmanụ ha na-ata ahịhịa, ka ha bịakwute anyị. 3 Ka anyị gaakwa bute Igbe+ Chineke anyị.” Devid chọrọ ka e bute ya maka na ndị Izrel leghaara ya anya n’oge Sọl na-achị.+ 4 Ha niile nabatara ihe a o kwuru, n’ihi na ọ dị ha mma. 5 Devid wee kpọkọta ndị Izrel niile, malite n’osimiri Ijipt* ruo Libo-hemat,*+ ka ha gaa Kiriat-jierim+ bute Igbe ezi Chineke. 6 Devid na ndị Izrel niile gawaziri Beala,+ si ya ruo Kiriat-jierim, nke dị na Juda, ka ha si ebe ahụ bute Igbe ezi Chineke, onye nọ n’ocheeze dị n’elu* ndị cherob.+ Ndị mmadụ na-aga ebe Igbe ahụ dị na-akpọ aha Jehova. 7 Ma, ha gara n’ụlọ Abinadab jiri ụgbọala ọhụrụ+ anụmanụ na-adọkpụ buru Igbe ezi Chineke. Ọza na Ahayo nọkwa na-edu ụgbọala ahụ.+ 8 Devid na ndị Izrel niile jikwa obi ha niile na-aṅụrị ọṅụ, na-abụkwa abụ n’ihu ezi Chineke. Ha ji ma une ma ụbọ akwara ma obere ịgbà+ ma ájà+ ma opi+ ma ngwá egwú ndị ọzọ, na-eti egwú. 9 Ma, mgbe ha ruru ebe a na-akpọ Kaịdọn, bụ́ ebe a na-azọcha ọka, Ọza matịrị aka jide Igbe ahụ, n’ihi na ọ fọrọ obere ka ehi ndị kpụ ụgbọala ahụ kwatuo Igbe ahụ. 10 Jehova wee wesa Ọza ezigbo iwe, gbuokwa ya ebe ahụ n’ihi na ọ matịrị aka jide Igbe ahụ.+ Ọ nwụkwara ebe ahụ n’ihu Chineke.+ 11 Ma iwe were Devid maka na Jehova wesara Ọza ezigbo iwe. A na-akpọkwa ebe ahụ Pirez-ọza* ruo taa. 12 Ihe a mere ka Devid tụọ ezi Chineke egwu n’ụbọchị ahụ, ya asị: “Olee otú m ga-esi bute Igbe ezi Chineke n’ụlọ m?”+ 13 Devid hapụziri ibute Igbe ahụ n’ụlọ ya dị n’Obodo Devid. Kama ibute ya ebe ahụ, o kwuru ka e buga ya n’ụlọ Obed-ịdọm onye Gat. 14 Igbe ezi Chineke wee dịrị n’ụlọ Obed-ịdọm ruo ọnwa atọ. Jehova nọkwa na-agọzi ezinụlọ Obed-ịdọm na ihe niile o nwere.+
^ Ma ọ bụ “malite na Shaịhọ,” ya bụ, otu mpaghara Osimiri Naịl.
^ Ma ọ bụ “ebe e si abanye Hemat.”
^ Pirez-ọza pụtara “Iwe E Wesara Ọza.”
1 Ihe E Mere 13